आजको राशिफल : साउन १४ गते बिहीबार, कुन-कुन राशिका शुभ ? – Khabarhouse
आजको राशिफल : साउन १४ गते बिहीबार, कुन-कुन राशिका शुभ ?
Khabar house | १४ श्रावण २०७८, बिहीबार ०१:२५ | Comments
काठमाडौं : वि.सं.२०७८ साल साउन १४ गते । बिहीबार । ईश्वी सन् २०२१ जुलाई २९ तारिख । नेपाल संवत् ११४१ । राक्षस संवत्सर । दक्षिणायन । वर्षा ऋतु । श्रीशाके १९४२ । श्रावण कृष्णपक्ष । तिथि–षष्ठी, अहोरात्र । नक्षत्र– उत्तरभाद्र पदा,२३ घडी १६ पला, दिउसो ०२ बजेर ४४ मिनेट उप्रान्त रेवती । काठमाडौंमा सूर्योदय ०५ बजेर २६ मिनेट,सूर्यास्त १८ बजेर ५३ मिनेट । दिनमान ३३ घडी ३८ पला ।
मेष राशि : लामो समयदेखि थाती रहेको आर्थिक मु’द्दाहरु हल भएर जानेछन् । लामो दुरिको विदेश यात्राको गतिलो सम्भावना रहेकोछ भने विदेशमा बसेर काम गर्नेहरुले मनग्गे रुपैया पैसा कमाउन सक्ने छन् । स्वदेश तथा विदेशमा उत्पा दित सामानको व्यावसाय फस्टा’एर जानेछ । पढाइ लेखाइ प्रगतिकै बाटोमा अगाडी बढ्ने योग रहेकोछ । माया प्रे’ममा सामान्य मन मुटा’व सिर्जना भएपनि अन्तत एक अर्कालाई विश्वास गर्दै अगाडी बढ्न सकिने समय रहेकोछ ।
बृष राशि : पढाइ लेखाइमा मन जानेछ भने बैकिङ क्षेत्रको लगानी फस्टाएर जानेछ । प्रे’म प्रशङमा रमाउन चाहनेहरुका लागि समयले साथ दिनेछ । दाजुभाई तथा आफन्तबाट काममा सहयोग हुने हुनाले लगानी बढाउन सकिनेछ । सवारी साधन प्राप्तीको योगलाई नकार्न सकिदैन । व्यापार व्यावसायमा लगानी गरी प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिनेछ भने प्राकृतिक स्रोत साधन तथा पै’त्रिक धन सम्पति परिचालन गरी मनग्गे आम्दानी गर्न सकिनेछ ।
मिथुन राशि : व्यापारिक प्रतिष्ठानको यात्रा हुनेछ । व्यापार व्यावसायमा लगानी गरी मनग्गे रुपैया पैसा कमाउन सकिनेछ भने नयाँ काम पाउने तथा नोकरिमा बढोत्तरी हुने योग रहेकोछ। राजनीति तथा समाजसेवामा समय दिनेहरुले राज्यबाट पद प्रतिष्ठा पाउने ग्रहयोग रहेकोछ । बुवा तथा आफन्तबाट सहयोग पाइने हुनाले महत्वपूर्ण कामहरु समयमा नै फत्ते गर्न सकिनेछ । पढाइ लेखाइमा प्रतिस्पर्धीहरुलार्ई किनारा लगाउदै प्रगति पथमा अगाडी बढ्न सकिनेछ ।
कर्कट राशि : आफ्नो रीतिरिवाज जोगाउने काममा समय खर्च हुनेछ । सामाजिक काम गरी समाजमा नाम तथा दाम दुवै कमाउन सकिनेछ । पढाइ लेखाइमा सुधार भएर जाने तथा आफन्तहरूलाई खुशी पार्न सकिने छ । नयाँ काम पाउने तथा बढुवा हुने योग रहेको छ । व्यापार व्यावसायमा लगानी बढाई प्रसस्त नाँफा कमाउने समय रहेको छ । प्रे’म प्रशङगमा रमाउन चाहनेहरुका लागी दिन उत्तम रहेकोछ ।
सिंह राशि : नयाँ कुराको खोज तथा अनुशन्धानमा समय बि’त्ने तथा भने जस्तो उपलव्धी हासिल गर्न सकिने छ । आक’स्मिक धन तथा सम्पती लाभ हुने समय रहेकोछ भने नसोचेको सम्पती हात लागी हुने छ । स्वास्थ्य स’म्वन्धी सामान्य सम’स्याले सताउने भएपनि काम गर्न असहज हुन छैन । माया प्रे’ममा एक अर्कालाई बुझ्दै अगाडी बढ्न सकिनेछ । व्यापार व्यावसायमा भनेजस्तो आम्दानी नभए पनि घाटा लाग्ने छैन ।
कन्या राशि : यात्राका क्रममा उपलव्धी मुलक कामहरु गर्न सकिनेछ । औषधीज’न्य व्यापारमा लगानी गर्नेहरुले मनग्गे आम्दानी गर्न सकिने तथा आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुने समय रहेको छ । पढाइ लेखाइ बिभिन्न कारणले बिग्रन सक्छ ध्यान दिनुहोला । माया प्रे’ममा सामि’प्यता बढेर जानेछ भने जीवन साथिको सहयोगले राम्रा काम गर्न सकिनेछ । भौतिक सम्पती तथा सवारी साधन प्राप्तीको गतिलो योग रहेकोछ ।
तुला राशि : आफन्त तथा मावली पक्षको सहयोग पाइने हुनाले कामहरु गर्न शरिरमा उर्जा पैदा हुनेछ । बिद्या तथा प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरुलार्ई हराउँदै सकारात्मक नतिजा हात पार्न सकिनेछ । व्यापारमा बढोत्तरिको योग रहेकोछ भने थोरै लगानी बाट यथेष्ट लाभ लिन सकिनेछ । अदालती निर्णयहरु तपार्ईँकै पक्षमा आउने भएको हुनाले न्याय पाएको अनुभुति हुनेछ । प्रे’ममा रमाउन चाहनेहरुका लागी समय उत्तम रहेकोछ ।
वृश्चिक राशि : अध्ययनमा मन जाने तथा ध्यान केन्द्रित हुनाले आफूले चाहेजस्तो सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ। आफन्त तथा गुरुजनहरुको सुझावलाई सिरोधार्य गर्दै अगाडी बढ्न सकिनेछ। मन परेको मानिसबाट उपाहार तथा भौतिक सम्पती पाउने योग रहेकोछ भने प्रे’ममा सामि’प्यता वढेर जानेछ । सन्तान, छोराछोरी तथा आफन्तसँग रमाईलो यात्राको तय गर्न सकिनेछ । व्यापारमा लगानी गरी आर्थिक अवस्था सुधार्न सकिने समय रहेकोछ ।
धनु राशि : कृषि तथा पशुपालन व्यवसायलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरी आम्दानीका स्रोतहरु फराकिला बनाउन सकिनेछ। घर जग्गा तथा सवारी साधनको खरिद बिक्रि गरी मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ । आमा वा अग्रजको सहयोगले महत्वपूर्ण कामहरु सम्पादन गर्न सकिनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा समय लिनेहरूले पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । अध्ययनमा ध्यान जाने हुनाले स्कूल कलेजमा तपार्ईँको नाम अग्र स्थानमा आउनेछ ।
मकर राशि : नोकरीमा सम्मान तथा राजनीतिमा लाग्नेहरूले विषेश पद पाउने समय रहेकोछ। छोटो तथा अर्थपूर्ण उपलव्धी मुलक यात्राको तय गर्न सकिनेछ भने गन्तव्य पहिल्याउँदै अगाडी बढ्न सकिनेछ। न्यालयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरु तपार्ईँकै पक्षमा आउनेछन् भने पराक्रम बढेर जाने हुनाले शाहशिलो काम गर्न जोस जागर बढेर आउनेछ । अध्ययनमा सुधार भएर जाने हुनाले साथी हरुलाई किनारा लगाउदै अगाडी बढ्न सकिनेछ ।
कुम्भ राशि : वन्द व्यापारमा सोचेजस्तो आम्दानी नहुन सक्छ । आम्दानी भन्दा खर्च बढ्ने हुनाले आर्थिक व्यावस्थापन गर्न गाह्रो हुनेछ। रुपैया पैसाको कारोबार गर्दा ध्यान दिनुहोला सापटी लगेको तथा लानेहरुले नफर्काउनाले काम गर्न गाह्रो हुनेछ । प्र’णय स’म्बन्ध चिसिने अधिक सम्भावना रहेकोछ भने आफन्तसँग नै मन मुटा’ब बढ्नेछ । नोकरी तथा कार्यक्षेत्रमा सहकर्मीबाट नै आलो’चना हुन सक्छ काम गर्दा ध्यान दिनुहोला ।
मीन राशि : सामाजिक कामहरु समयमा नै सम्पादन गर्न सकिने हुँदा मान सम्मानमा बृद्धि हुनेछ। राजनीतिकर्मिले सर्वसाधारणका काम गरी पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । पढाइ लेखाइमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकिने तथा नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ। भौतिक सम्पती तथा विला’शी वस्तुको प्रयोग गर्न पाइने समय रहेकोले मन प्रशन्न हुनेछ । माया प्रे’ममा सा’मिप्यता बढेर जानेछ भने दा’म्पत्य जीवन खुशी रहनेछ। तपाईँ दिन शुभ रहोस् । यूवा ज्योतिषी डीपी भण्डारी ।
हेर्नुहोस आजको राशिफल : असोज १ गते शुक्रबार, यी राशिहरूकाे चम्किनेछ भाग्य !